The Soul Hunter ( 2016 ) - Myanmar Asian TV Channel
The Soul Hunter ( 2016 )
ဒီနေ့တော့အားလုံးအတွက် တရုတ်မှော်ဆန်ဆန်ပရောဂဆန်ဆန်ကားလေးတစ်ကားတင်ဆက်ပေးမယ်နော် …
ဇာတ်လမ်းကိုအစပျိုးရမယ်ဆိုရင် မှော်လောကသားတွေနေထိုင်ရှင်သန်နေတဲ့မှော်မြို့တော်တခုရှိတယ် … ထိုမြို့မှာ ငယ်ရွယ်ပြီးမှော်လောကမှာနာမည်နှစ်လုံးထဲနဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ ကောင်လေးတယောက်ရှိတယ် …
စူယန် လို့ပြောလိုက်တာနဲ့မသိတဲ့သူ မရှိလောက်အောင်နာမည်ကြီးပြီး သူကအနာဂတ်ကိုလဲကြိုမြင်နိုင်သေးတယ် … သူ့လက်အောက်မှာတချိန်က ဖိန်ဖိန် ဆိုတဲ့ တပည့်မလေးတယောက်ရှိတယ် … ကောင်မလေးကတော့သူဠေးကိုကျိတ်ပုန်းလေးကြွေနေတာပေါ့ …
ဒါမယ့်တရက်ရောက်တော့ စူယန်က သူနေထိုင်နေတဲ့မှော်မြို့တော်ကြီးနဲ့ တပည့်မလေးကိုပစ်ထားခဲ့တယ် … အဲ့လိုပစ်ထားရတာကလဲအကြောင်းရှိလို့နော် …
အဲ့လိုနဲ့ လပိုင်းအနည်းငယ်ကြာပြီးစူယန် နဲ့ ဖိန်ဖိန် ဟာ ကျိန်စာတခုကြောင့်ပြန်တွေ့ဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့တယ် …
ထိုပြန်တွေ့ချိန်မှာ ဖိန်ဖိန် ရဲ့အကိုဖြစ်သူက အမည်မသိရောဂါဝေဒနာတခုခံစားနေရချိန် … ဆရာဝန်တွေအားလုံးကလဲလက်လျော့ထားခဲ့ပြီးပြီ …
ထိုရောဂါကို စူယန်ကုပေးဖို့အကြောင်းဖန်လာချိန်မှာ ရောဂါကပြုစားခံထားရတာဖြစ်နေတာသိခဲ့ရော … အဲ့တာ့စူယန်တယောက် ထိုပြုစားမှုကိုချေဖျက်ဖို့အတွက် ကြိုးစားပုံအဆင့်ဆင့်ကိုကြည့်ရှုရင်းကယ်နိုင်လား ? မကယ်နိုင်လား ? ဆိုတာပရိသတ်ကြီးကြည့်ရှုကြပါနော်
စကားမစပ် မင်းသားရောမင်းသမီးရောအရမ်းချောကြတယ်နော် …. xD
Soliddrive.co Myanmar 720p Download Openload.co Myanmar 720p Download
My Love, My Bride(2014)
Review 😉😉 အခုကားလေးက နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်၂ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဂျိုဂျန်ဆပ်နဲ့ မင်းသမီးချောလေး ရှင်းမင်းအာတို့ပါဝင်ထားတာပါ။ ကားလေးနာမည်ကတော့ My love my brideပါ။ ဒီကားမှာတော့ မင်းသမီးလေးကပန်းချီဆရာမလေး မီယောင်းအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး မင်းသားကတော့ လူမှုစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာက ဝန်ထမ်းလေး ကဗျာတွေရေးရတာဝါသနာပါသူ ယောင်းမင်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထား ပါတယ်။ ခဏခဏရန်ဖြစ်လ်ုက် ပြန်ချစ်လိုက်နဲ့ ချစ် သူသက်တမ်းကြာမှလက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူတို့နှစ်ယောက် လက်ထပ်ပြီးခါစမှာ အဆင်ပြေချော့မွေ့နေပေမယ့်…. နောက်ပိုင်းမှာတော့ အချစ်ဦးနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အခါ…
Animation ကားကောင်းလေးတကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော် … နှင်းဘုရင်မ နဲ့ နှင်းဘုရင်ကိုချေမှုန်းပေးခဲ့တဲ့ ဂါဒါ နဲ့ ခိုင် ဆိုတဲ့မိဘမဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်နဲ့ပဲ ဇာတ်လမ်းလေးစလိုက်ရအောင် … ဂါဒါမှာအိပ်မက်တခုရှိတယ်သူမ မိဘတွေကိုရှာတွေ့ဖို့ပေါ့ … သူမမိဘတွေကမြောက်ဘက်ကတိုက်ခတ်တဲ့လေမုန်တိုင်းတခုကြောင့်သူတို့မိသားစု ဝေးကွာခဲ့ရတယ် … ထိုအချိန်တုန်းက Trolls လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ဆိုးကောင်မှင်စာလေးတွေရှိခဲ့ကြတယ် … သူတို့တွေကတချိန်တုန်းကနှင်းဘုရင်မရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ် … ဂါဒါနဲ့ခိုင်မောင်နှမနှစ်ယောက်က အွန်လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ဆိုးမှင်စာလေးအိမ်ကိုသွားခည်ပတ်ခဲ့ရင်းက ဇာတ်လမ်းစခဲ့ပါတယ် … သွားလည်နေချိန်မှာ ရိုလန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေး…
Secret Fruit ( 2017 )
ပိတ်ရက်လေးမှာကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ secret Fruit ဆိုတဲ့ ChineseRomamceကားလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် ဇာတ်လမ်းလေးက အိမ်ထောင်ရေးတွေကြားသူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်တွေကြားမှာ ကိုယ်မသိတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေအများကြီးဆိုတာ ဖော်ကြူးရိုက်ကူးထားတာပါ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လူငယ်တွေကိုကိုယ်ထင်နေမြင်နေတာကြည့် တစ်ထစ်ချမသတ်မှတ်ဖို့…….. အရာတိုင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာကိုယ်မသိသေးတဲ့အရာတွေရှိသေးတယ်ဆိုတာမျိုး……. ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးက နာလည်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုပီး သိအောင် ပညာပေးထားတဲ့ရိုမန့်တစ်ဆန်ဆန်ရောပညာပေးဆန်ဆန်ရောရိုက်ထားတာတဲ့ကားလေးပါ ငယ်ငယ်လေးကတည်းကအတူတူကြီးပြင်းလာတဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်…….. အနေနီးတော့မင်းသမီးယူချိဇီက မင်းသားကိုငယ်ငယ်တည်းက စိတ်ဝင်စားနေတယ် ဒါပေမယ့်မင်းသားကကြိုက်တာနောက်တစ်ယောက်ဆရာမလေးကို …….. ဒါပေမယ့် သူ့ဘေးနားမှာနေပြီး သူ့ကိုအစစအရာရာကူညီပေးတဲ့ ယူချိဇီရဲ့စိတ်ကို သိမြင်လာတဲ့အခါမှာတော့ သူတကယ်ကြိုက်တာဘယ်သူလဲ…….??????…
The Beautyful Inside(2015)
The Beauty Inside (2015) ဒီရုပ်ရှင်ဟာဆိုရင် beauty inside(2012) american film ကို ပြန်ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ ratingအရလည်း IMDb မှာ 7.3 ရထားတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတကယ့်နာမည်ကြီးဇာတ်ဆောင်တွေပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြတာပါ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့********* ပရိဘောဂ ဒီဇိုင်းနာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကင်ဝူဂျင်ဟာ အိပ်ရာ နိုးတိုင်း တခြားသူတစ်ယောက်အဖြစ် ပြောင်းသွားတတ်ပါတယ် မိန်းမ ယောကျာ်း အသက်အရွယ်မရွေး ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သူ့မှာ…
ဒီကားလေးကိုတော့ 2014 ခုနှစ်မှာထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပြီး manga ကို ပြန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ japanese school romance အမျိုးအစား movie လေးဖြစ်ပါတယ် … ယိုရှိအိုက ဖုတဘဟာ အလယ်တန်းကျောင်းသူဘဝမှာ တနခ ကိုးဆိုတဲ့ ကြင်နာတတ်တဲ့ ကျောင်းသားလေးကို သဘောကျခဲ့တယ် … သူတို့ နီးစပ်တော့မယ့်အချိန်မှာပဲ တနခ ကိုးက ကျောင်းပြောင်းသွားလို့ အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ် … အထက်တန်းကျောင်းရောက်တဲ့အခါ…
ဒီကားလေးဟာ May 2017 မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Actionကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပြီး The King Loves ထဲအိမ်ရှေ့စံမင်းသားလေး ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ … ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ – ကျော်ကြားသော ဒုစရိုက်ဂိုဏ်းသားတစ်ဦးဖြစ်လိုတဲ့ ဂျဲဟို ( Sol Kyung Gu ) က ထောင်ထဲမှာ အထင်ကရဖြစ်နေတဲ့ ထောင်သားအသစ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဟွန်းဆူ ( Im Si Wan…
Born to love you(2012)
2012မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ကားလေးဖြစ်ပြီး dramaဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့အပြင် ရသအမျိုးမျိုးပါပေးစွမ်းမှာပါ😀😢😊 အဓိကဇာတ်ဆောင် ရစ်ဒ်အဖြစ် နာမည်ကြီး Coco Martinကအချစ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ထင်ရာ လုပ်တဲ့ဂျစ်ကန်ကန်ကောင်လေးနေရာကနေသရုပ်ဆောင်ထားပြီး အဓိကမင်းသမီးနေရာမှာတော့ ဂျိုဝီအဖြစ် Angeline Quintoကိုတွေ့ရမှာပါ အချစ်ကိုကိုးကွယ်တဲ့စကားပြန်ကောင်မလေးနဲ့ အချစ်ကိုမုန်းတီးတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာလေးတို့ ကိုရီးယားကိုသွားရောက်ရင်းဘယ်လို Romantic လေးတွေဖြစ်လာမလဲ ပေါင်းစည်းမှာလား😍😍 ကွဲကွာမှာလား ဆိုတာကို😭😭 ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော်💗💗 Translated by May Thinzar Myint Encoded by…